मझेरी भलाकुसारी, अंक ०५ (सुषमा मानन्धर) | मझेरी डट कम
मझेरी भलाकुसारी, अंक ०५ (सुषमा मानन्धर)
kbs — Sun, 09/19/2010 - 20:46
शुरुमा यहाँको व्यक्तिगत तथा साहित्यिक परिचय पाऊँ न ।
धन्यवाद कुमार जी । आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनु भएकोमा आभारी छु । हल्का कलम चलाउनुको अलावाम एक कर्मचारी पनि हुँ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुरमा प्रशायकीय अधिकृत छु । हाल केही महिनादेखि भने कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जावलाखेलमा काजमा कार्यरत छु । घर मेरो ललितपुर कुमारीपाटीमा छ र सपरिवार बस्छु ।
साहित्यतिरको कुरामा, साहित्यप्रेमी भएर पनि समय अभावको कारणले साहित्यिक जमघटहरूमा गैरहन पाउँदिन । यसकै लागि भनेर समर्पित भै लाग्न नसकेको र धेरै जसो समय अफिसकै कार्यमा व्यस्त रहनु पर्ने हुँदा मैले चिन्ने साहित्यिक अनुहार र शायद मलाई चिन्नेहरूको सन्जाल पनि सानै छ । समय परिस्थिति अनुकुल नहुने र पर्याप्त नपाउनाले चाहे अनुरुप निरन्तर लेख्न सकेकी पनि छैन । धेरै कथाहरू दिमागमै उम्रन्छन् र लेखिन नपाउँदै सुक्छन् पनि । तैपनि दुईचार जनाले साहित्यकार मानिदिनु भएको छ, साह्रै खुशी लाग्छ ।
तपाईंको लागि साहित्य के हो किन यसमा लाग्नु भयो ?
साहित्य मेरो लागि एउटा भोगाई हो । एउटा जीवन मैले आफैंले वा अरु कसैले भोगेको । यो समाजको प्रतिविम्ब हो । समाजमा जे जस्ता कुरा घटिरहेका हुन्छन्, साहित्यले त्यसैलाई प्रतिविम्बित गर्छ । प्रत्येक व्यक्ति म खुद आफैं साथीभाइ वा कुनै अर्को व्यक्तिले भोगेका सुख दुःखका अनुभवहरू, इच्छा, सपना र कल्पनाहरू शब्दमा उनिएर साहित्य बन्छ । साहित्य मेरो लागि नशा पनि हो ।
मैले कहिलेदेखि लेख्न शुरु गरें मलाई याद छैन । जानी-नजानी कविताबाट शुरु गरेको साहित्यको यात्रामा अझै पनि सिक्दै छु । सानैदेखि लेख्थें र त्यसलाई प्रशारण गर्न रेडियो नेपाल वा प्रकाशनको लागि पत्रिकाहरूमा पठाउँथें । रचना प्रशारण भएमा म पुन अर्को लेख्न हौसिन्थें, नभए फेरि अर्को हप्तासम्मको लागि बाँकी रहन्थ्यो एउटा तीव्र पर्खाई । यसरी लेख्ने र प्रतिक्षा गर्ने गर्दा-गर्दै बानी बस्यो र यो बानी नै पछि गएर नशा बन्यो । अचेल यो नशाा यति हावी बनेको छ अलि बढी दिनसम्म लेख्न पढ्न पाईनँ भने छट्पटाहट् हुन्छ ।
तपाईंले कविता, गजल, लघु कथा, कथा आदि विधामा कलम चलाउनु भएको पाइन्छ । आफैंले चाहिँ कुन विधालाई विशेष आफ्नो विधा बनाउनु भएको छ । अनि भविष्यमा के कस्ता लेखनमा लाग्ने बिचार छ ?
Jack of all, master of none हुँला कि भन्ने पो डर लाग्छ मलाई । तपाईंले भन्नुभए जस्तै धेरैतिर रुचि छ र हात पनि हालेकी छु । भविष्यमा पनि यी सबै विधामा लेखिरहे पनि आफ्नो विशेष विधा कथालाई बनाउन चाहन्छु, सकेसम्म यसैलाई निरन्तरता दिन्छु ।
ल्पट कसरी खोज्नु हुन्छ ?
लेख्नेहरूको मनमस्तिष्क जहिले पनि भोकाएकै हुँदो रहेछ । लेखकहरूले कुनै पनि कुरामा ल्पट खोजिरहेका हुन्छन् । तपाईंसँगको कुराकानी गर्दा वा तपाईंका हाउभाउलाई पनि ल्पट बनाउन सकिन्छ कि भनी लेखकको आँखाले हेरिरहेको हुन्छ । हरेक दिन घट्ने घटना, पत्रिकाको खबर वा कसैले सुनाएका प्रसंग…। यतिमात्र हैन घरभित्र, बाटो हिँड्दा-हिँड्दै र अफिसमा सहकर्मीहरूबाट पनि ल्पट पाएकी छु । देख्ने सुन्नेका लागि साधारण होलान्, तर म हरेक सुखद र दुखद क्षणमा व्यक्ति र घटनामा पनि ल्पट खोजि र सोचिरहन्छु ।
कस्तो बेलामा लेख्नुहुन्छ ? लेख्न भनेरै बस्नुहुन्छ कि भावना जाग्यो भने लेख्न थाल्नुहुन्छ ?
यो प्रसंगमा एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो । अलि अगाडि दुईटा लेख लेखेथें…। लेख्ने मूड र लेख्छु भन्दाभन्दै । त्यसमा मैले यिनै कुरालाई लेखेकी छु । मलाई बास्तवमा यो लेख्ने मूड र समय वीच तालमेल मिलाउन निकै गाह्रो पर्छ । जब लेख्ने मूडमा हुन्छु, समय नै हुन्न । लेख्नै पर्यो भनेर समय मिलाउँछु, पटक्कै लेख्ने मूड आउँदैन । लेख्छु नै भनेर यसरी बस्दा लेख्न नसकिने भने हैन। तर त्यो लेखाइमा न्याय गर्न सकें जस्तो लाग्दैन । त्यसैले भावना पलाएमा नै म लेख्न बस्छु । मान्छेका लेख्ने विभिन्न ठाउँ हुन्छन् । म चैं भान्छा कोठामा बसेर पढ्छु,लेख्छु । भान्छाकोठा मेरो सानो संसार हो । खाना पकाउँदै, तरकारी ओइरदैं, म धेरै कल्पना पनि पकाइरहेकी हुन्छु । घरको भान्छामा उत्तरतिर फर्केको झ्याल छ, जहाँबाट म प्रकृति र ल्पट खोजिरहन्छु । मेरा धेरै कथा-कवितामा यो झ्यालको प्रसंग छ, भ्यालबाट देखिने दृष्य छन् ।
तपाईंका प्रेरणाका स्रोत बनेका पुस्तकलेखक आदि छन् भने भनिदिनुस् न ।
त्यस्तो प्रेरणाका स्रोत नै भनेर देखाउन मसँग एउटै पुस्तक र व्यक्ति त छैनन् । शुरुशुरुमा म पुस्तक धेरै पढ्थें । हरेक रात दुईवटा उपन्यास सकेर मात्र निदाउँथे । त्यसका स-साना कुराले पनि मन छुन्थ्यो र म रुन्थें । अनि लामो समयसम्म त्यो दिल-दिमागभित्र रहिरहन्थ्यो । अहिले त तिनका नाम पनि बििर्ससकें । व्यक्ति नै किन र! कैलेकाहीँ त कुनै घटनाले पनि मलाई लेख्न प्रेरित गरेका छन् । साथीहरूले सुनाएका अनुभवलाई थीम बनाएर पनि मैले कथा लेखेकी छु । अहिले चैं अफिसमा मेरो मित्रमण्डली छ जसले मलाई लेख्न सुझाव दिइरहन्छन् । लेखकहरूमा मलाई पारिजात असाध्ये मनपर्छ । अमृता प्रितम, तसलिमा नसरिन, सुरजित एच के पासा, चेखोवका केही रचना निकै मनपरेका छन् । "चपाइएका अनुहार", "आमा", "मन", "अर्को जन्म", "शार्लेटस् वेभ", "दि डेभिलस् लेडि" आदि पढिएका पुस्तकमा केही राम्रा र रमाइला पुस्तक हुन् ।
तपाईं आफैंका लेखहरूमा विशेष आत्मसन्तुष्टि मिलेका रचनाहरू छन् भने बताइदिनुस् न । त्यसमा तपाईंले के सन्देश दिन खोज्नुभएको छ? अनि कति हदसम्म त्यसलाई चित्रण गर्न सफल भएँ जस्तो लाग्छ ?
म भावना फुर्दा मात्र लेख्छु । त्यसैले मेरा रचना संख्यामा थोरै छन् । आफ्ना वरिपरी घट्ने घटनाहरूलाई नै मैले कथाको रुप दिने कोशिश गर्दै आएको छु । तिनलाई आफूसक्दो यथार्थ बनाउने मेरो प्रयासमा म कत्तिको सफल भएँ आदरणीय पाठकहरूले मूल्याँकन गर्नु हुने छ ।
साहित्यले तत्कालिन समाजको बस्तुस्थिति, चलनचल्ती, अवस्थालाई मात्र उजागर गर्ने हैन कि, त्यसले समाजलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनसक्ने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । केही महिना अघि निस्किएको गरीमाको नारी अंकमा छापिएको मेरो पछिल्लो कथा "आ-आफ्नो धरातल"मा अचेल मान्छेहरू बिहे जस्तो अहम् कुरालाई सुख र भोतिक खुशीको चाहनामा सम्पन्न अनि बिदेशबाट फर्केका अत्याधुनिकहरूसँग गाँस्न लालायित रहन्छन् भन्ने चित्रण गरेकी छु । विवेक नराखी कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नु उचित हैन भन्ने मैले यसमा सन्देश दिन खोजेकी छु ।
लेखन क्षेत्रबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहन्छ के कस्ता कुराहरू भैदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
कतै पढेकी थिएँ - सन्तुष्टि भनेको पूर्णविराम हो । त्यसैले हामीले सन्तुष्ट हुनुहुँदैन । किनकि सन्तुष्टिपछि अर्को प्रयास गरिँदैन । आफूलाई त लेख्न भर्खर शुरु गर्दैछु, सिक्दैछु जस्तो लाग्छ। त्यसैले अहिले नै कसरी सन्तुष्ट छु भन्नु ?
म बेला-बेला कल्पना गर्छु कुनै रमणीय स्थल, हरिया रुख र डाँडाको फेद, शान्त वातावरण, तातो चिया, साथमा मात्र कपी र कम्पयुटर अनि जिम्मेवारी विना म । सोच्छु यदि यस्तो हुँदो हो, म कत्ति लेख्थें ।
जागीर पनि गर्नुहुन्छ क्यारे । लेखेरै जीविकोपार्जन गर्न सकने स्थिति आछैन र ?
हो जागीरे छु । जागीरका पनि आफ्ना धर्म, नियम, काइदा, कानून हुन्छन् । कर्मचारी परें, अहिले नै खाँदै गरेको जागीर चटक्कै छाडेर साहित्यमा डुब्ने र यसैबाट आफ्नो जीवन धान्न सक्ने स्थिति मेरो मात्र हैन नेपालमा कसैको पनि बनिसकेको मलाई चैं थाहा छैन । जति पनि नाम चलेका आदरणीय साहित्य सर्जकहरू हुनुहुन्छ, अधिकाँश कुनै न कुनै काम र पेशासँग आबद्ध हुनुहुन्छ । तर बिदेशमा जस्तो भोलि त्यो दिन जरुर आउला, जब नेपाली साहित्यकारहरूले लेखाइलाई नै आफ्नो जागीर बनाउन सक्नेछन् ।
नेपालमा बस्नुहुन्छ । बिदेशमा हुने साहित्यिक गतिविधिवारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
फरवार्ड इमेलबाट यस्तै मझेरी खोल्दा र कुनै इमेल साथीले दिएका जानकारीभन्दा बढी नढाँटी भन्नु पर्दा त्यस्ता गतिविधिवारे थाहा पाउँदिन, थाहा हुन्न ।
समकालीन लेखकहरूसँग कत्तिको सम्बन्ध छ बिशेष अन्तरकृया गर्ने साहित्यकारहरू छन् के कस्ता विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ ?
दिनभरी अफिसकै समयमा बाँधिन्छु । लेखकमित्रहरूसँग प्रत्यक्ष बसेर भेटघाटछलफल र गफ गर्न ठूलै साइत जुराउनु पर्छ मलाई । तैपनि इमेल र फोनबाट सम्पर्क चैं गरिन्छ । सहयोगी र धेरै पुरानो लेखकमित्र हुनुहुन्छ- प्रकाश सायमी । वहाँले लेख-रचनामा राम्रो प्रतिकृया दिनुहुन्छ । साहित्यकार निशा के.सी. मिल्ने साथी हो । ऊसँग आफ्नो लेखाईवारे ड्राफ्टदेखि नै छलफल शुरु हुन्छ । अफिसमा पनि साहित्य अनुरागी साथीहरूको समूह छ जसले मेरा रचनाहरू पढेर टिप्पणी गरी प्रेरित गर्छन् । बलराम अधिकारी, बेद पौडेल, तेज कुमार श्रेष्ठ, भवानी पौडल, कल्पलता दाहाल र आशुतोषजीले दिँदै आउनु भएको अमूल्य सुझावप्रति म सधैं आभारी रहन्छु ।
नेपाली साहित्य कस्तो दिशातर्फ लागेको छ जस्तो लाग्छ ? अनि विशेष आश गर्न सकिने स्रष्टाको नाम लिन पर्दा कसकसको नाम लिनु हुन्छ ?
नेपाली साहित्य पहिले भन्दा व्यापक र सम्पन्न भएको कुरामा शँका छैन । तर यसमा कोही आफ्नो र पराई हुँदैन । साहित्य सबैको हो र कुनै विशेष वर्गको मात्र पेवा नभै सबैको लागि साहित्य हो । अलि दुखलाग्दो कुरो- साहित्यभित्र चलखेल केवल नाम चलिसकेका र स्थापित लेखकहरूको मात्र हुन्छ जस्तो फिल गरेकी छु । कुनै पनि मिडिया, माध्यम र अवसरहरूमा प्रवेश गर्नको लागि बनेको चक्रव्यूह तोड्नु अन्य उदियमान, संघर्षरत लेखकहरूलाई गाह्रो छ । एक्सपोजर हुने उचित मौका पाइँदैन । त्यसैले धेरै प्रतिभाहरू गुम्सिएरै हराउँछन् । उदियमान लेखकहरू धेरै हुनुहुन्छ । केहीका मात्र नाम लिनु भन्दा सबैप्रति आशावादी होउँ र स्थापितहरूहरूले नयाँ पिढीलाई उत्प्रेरित गर्छन् भन्ने आशा पनि गरौं ।
नेपाली साहित्यको मार्केट बढाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? के लेखकले पाठकहरूले खोजेका खुराकहरू पस्किन सकेका छैनन् त ?
हामीकहाँ कमै मात्र त्यस्ता किताब छन् जसको जोर-शोरले विज्ञापन चर्चा परिचर्चा पाउनुको साथै बजारमा आउने वित्तिकै बिकोस् । हामीकहाँ न त राम्ररी पब्लिसिटी नै हुन्छ, न त किताबको आकर्षक कवरेजडिजाईनमा नै ध्यान दिइन्छ । अलिकति खर्चेर किताबलाई बढी आकर्षक बनाउन सकिएमा कम्तीमा पाठकको ध्यान आकृष्ट गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मूल्याँकन गर्ने पाठकहरू नै त हुन् नि । केही मात्रामा पाठकहरू जागरुक भए पनि कुनै विशेष किताब, लेखकहरूको वारेमा चासो सोधीखोजी गर्ने र आउँदो प्रकाशनको अधैर्य प्रतिक्षा गर्ने पाठकहरू हामीकहाँ कमै छन् । पाठक र लेखकको वीचमा फीडब्याक आदानप्रदान हुने गरेमा मात्र लेखकले पाठकको रुचि अनुसारको सामग्री राख्न सक्छ । यता लेखकहरूले आफ्नो भावना बमोजिम लेख्छन्, उता पाठकहरू आफ्नो रुचिका किताब खोज्छन् । यसो भएमा मिलन बिन्दु कहाँनिर हुन्छ ? तर फेरि पूर्णतया बजारकै मात्र रुचि हेर्न थालियो भने व्यवसायिक लेखक त जन्मला, तर यथार्थ लेखक भने ऊभित्र मर्छ । त्यसैले विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाहरूको संख्या बढाउने, ईपत्रिकाहरू चलाउने, पाठक क्लबहरूको स्थापना र पाठकहरूको पनि रुचिलाई ध्यानमा राखेर लेखकहरूले केही कम्प्रोमाइज गरी लेख्ने गरिए साहित्यको मार्केट बढ्थ्यो कि !
लेखक पाठकको दूरी कत्तिको रहेको महशुश गर्नु हुन्छ ? त्यो हटाउन के गर्नु आवश्यक छ ?
लेखक-पाठक वीचको दूरी टाढा नभए पनि नजिक पनि छैन । लेख रचना पढियो, राम्रो लाग्यो/लागेन, के कस्ता कमी छन्, भन्ने जानकारी हामी लेखक समक्ष पुर्याउँदैनौं, जसले गर्दा लेखकले आफ्नो लेखाइमा भएका त्रुटीलाई सुधार्न पाउँदैन । हुन त लेखकसम्म पुग्ने माध्यमका अभावले पनि यस्तो हुन सक्छ । अचेल इमेल, फोन र फेसबुक छन्, कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सकिहालिन्छ । पाठकहरूले पस्किएका रचनाहरू पढेपछि लेखकलाई आफ्नो धारणा बताउने र लेखकहरूले पनि तिनलाई उचित सम्मानसाथ लागु गर्ने हो भने दूरी नजिक भैहाल्छ नि ।
अनि तपाईंको आफ्नै वारेमा कुरा गर्दा, पाठकहरूबाट प्रतिकृयाहरू आइरहन्छन् कि? के कस्ता टिप्पणीहरू पाउनुहुन्छ ?
पाठक प्रतिकृया मेरो लागि ठूलो निधि हो । आफ्नो लागि आउने प्रतिकृयाको मलाई असाध्यै चासो रहन्छ । रचना प्रकाशनपछि प्रतिकृया आउने हो वा हैन कस्तो आउने हो भन्ने डर र कौतुहल दुवै रहन्छ । कतिपय आदरणीय पाठकहरूले पत्रिकामै, वेबसाइटमै र कतिपयले चैं इमेल गरेर र फोनमा पनि प्रतिकृया जनाउनु हुन्छ । राम्रो भनेर प्रशंसा गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यति स्तरीय हुन नसकेको भनेर बताउने पनि हुनुहुन्छ । कतिपयले अचेल किन नलेख्नु भा'को? भनेर झक्झक्याउनु पनि हुन्छ । बिराटनगरका डा. चुन्नी यस्तै एकजना पाठक हुनुहुन्छ जसले लामो समयदेखि प्रत्येक बिहान नबिराइकन एसएमएस गरेर शुभकामना व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ र मेरा रचनाहरू कहाँ कतिबेला छापिन्छन् जानकारी लिइरहनु हुन्छ ।
आजकल निकै भयो मझेरीमा देखिन छाड्नुभो । केही विशेष साहित्यिक गतिविधिमा लाग्नु भएको पो हो कि ?
हेर्नुस् न! इच्छा हुँदाहुँदै पनि मझेरीमा चियाइरहन पाउँदिन । अफिसको व्यस्तताघरको जिम्मेवारी, बाँकी काम लोडसेिडङले गरिदिन्छ । गुनासोयुक्त टिप्पणीको लागि धन्यवाद कुमार जी । अब चैं झुल्किरहने कोशिश गर्छु । यो वर्ष कथा-संग्रह निकाल्छु भन्ने योजना छ । समय अभावका कारण मेरो इच्छा योजनामा मात्र सिमित नरहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिनुस् न प्लीज ।
अवश्य, हाम्रो शुभकामना छ यहाँलाई। अर्को प्रश्नतिर लागौं, मझेरी कत्तिको हेर्नुहुन्छ यहाँ राखिने लेख रचना कत्तिको स्तरीय लाग्छ ?
हेर्छु कहिलेकाहीँ । धेरै दिनपछि अस्ति हेरेथें । पहिलेको भन्दा परिवर्तित र राम्रो लाग्यो । फोटोहरू पनि दिन थाल्नु भएछ । छापिएका रचनाहरू स्तरीय पनि छन्, स्तरीय बन्न बाँकी पनि छन् ।
मझेरीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
यसलाई प्रभावकारी बनाउन समसामयिक परिवर्तनहरूतिर पनि ध्यान दिँदै जानुपर्छ । आकर्षक वेबडिजाइन, नयाँ-नयाँ शिर्षक र विधाहरू पाठकहरूबाट प्रतिकृयाहरू लिने र सकेसम्म स्तरीय रचनाहरू छापिनको लागि कुनै क्राइटेरीया तोकिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो ।
मझेरीको लेखकको हैसियतले पाठकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
लेखक जिउँदो पाठककै कारणले हुन्छ । यदि पाठकहरूले नै अस्वीकार गरे लेखकको के अस्तित्व र औचित्य ? त्यसैले जति बढी पाठक छन्, त्यति नै लेखक सफल हुन्छन् । अतः आदरणीय पाठकहरू तपाईंहरूले कुनै पनि रचना पढेपछि राम्रो-नराम्रोको सही प्रतिकृया गरेर लेखकलाई दिशानिर्देश गरिदिनु भयो भने लेखाइहरू फिल्टर हुँदै जान्छन् र समाजले स्तरीय साहित्य पाउन सक्छ ।
अन्तमा केही भन्न चाहनु हुन्छ भने बताइदिनु होला ।
सबैले लेख्छन्, तर लेख्न सजिलो छैन । सबै लेख्नेहरू सफल पनि हुँदैनन् । त्यसो भन्दैमा नलेखीकन लेखक पनि बनिँदैन । लेख्नुपर्छ र धेरै लेख्नुपर्छ । लेख्नेले हरेश चैं खानु हुँदैन । निरन्तर बग्ने नदी नै निर्मल हुन्छ । कुनै पनि कुरा मिहिनेतका साथ गरिन्छ भने प्रतिफल जरुर मीठो हुन्छ । मझेरीका लेखक र पाठक मित्रहरू एक अर्काको शुभचिन्तक बनेर एक अर्कालाई सहयोग गरौं । राम्रो साहित्यको लागि हामीलाई लेखक र पाठक दुवै चाहिन्छ ।
अन्तमा, कुमारजी तपाईं लगायत मझेरीका सम्पूर्ण पाठकलाई दशैं तिहारको शुभकामना ।
सुष्माजी, यहाँलाई पनि अमूल्य समय दिनुभएकोमा हार्दिक आभार र दशैं-तिहारको शुभकामना!
सुषमा मानन्धरका लेख/रचनाहरू पढ्न यता
‹ मझेरी भलाकुसारी, अंक ०७ (शरण आँसु) मझेरी भलाकुसारी, अंक ०६ (प्रकाश पौडेल माइला) ›
nandalal.acharya — Tue, 09/21/2010 - 19:35
शुष्मा तीर्थ गोर्खेसाइँलाजस्ता स्रष्टाहरूका कुरा पढ्दा उर्जा भेटियो
यहाँ चै विशेष शुष्माज्यूको सामाजिक यथार्थवाद र आदर्शोन्मुख समाजको परिकल्पना र समाधान सहितको सृष्टिका चाहनाको आशयलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई नदिई रहन सक्दिनँ
सुस्मा जी, भलाकुसारी राम्रो
prakashpoudel — Tue, 09/21/2010 - 22:28
सुस्मा जी, भलाकुसारी राम्रो लग्यो. बरु मझेरी डट कममा अल्ली पातलिदै जानु भयको जस्तो लागेक छ. अल्ली रचना हेर्न पाय हुन्थ्यो कि... हुन त मेरो अबस्था नि तेस्तै छ. भलाकुशारी प्रकाशन गर्ने जमर्को गर्नु हुने मझेरीका संचालक कुमार जी लाइ हार्दिक धन्यवाद. आगामी दिनमा नि यस्तै आशा छ
सुषमाजी जस्तो नेपाली वाङ्मयको
kbs — Thu, 09/23/2010 - 14:17
सुषमाजी जस्तो नेपाली वाङ्मयको जल्दोबल्दो र प्रमिसिङ् व्यक्तित्वको अन्तर्बार्ता राख्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं। अवश्य पनि पाठकहरूलाई सुषमाजीको लेख रचनाहरूका अलवा पर्दा पछाडिका पक्षहरूको बारेमा जानकारी हुनेछ। म आफैंलाई पनि निकै जानकारी मिल्यो ।
सुषमाजीले निकै समय खर्चेर उत्तर दिनुभा'छ र त्यत्तिकै समय लगाएर टाइप गरेर पठाउनुभा'छ। वहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ।
malai padhnu hune sabai
shushma (not verified) — Thu, 09/23/2010 - 16:40
malai padhnu hune sabai adaraniya pathakharuprati aabhari chhu ra sadar dhanyabad.aashaa chha agun dinma pani mera lekhaima comment garnu hunechha ra sujhab dinu hune chha.
durga man dangol (not verified) — Sun, 09/26/2010 - 10:48
प्रतिकृया दिने साथीहरू सबैलाई
kbs — Wed, 09/29/2010 - 20:06
प्रतिकृया दिने साथीहरू सबैलाई धन्यवाद छ। मझेरीको यस स्रष्टासँग भालाकुसारी छेउलाई निरन्तर दिने प्रयास गर्नेछौं ।
नयाँ भलाकुसारीको व्यग्र
nandalal.acharya — Fri, 10/01/2010 - 04:03
नयाँ भलाकुसारीको व्यग्र प्रतिक्षामा KBS SIR.
पाकाहरूका कुरा त धेरै पढ्यौ
युवा जोस भएका कुरा पढ्ने रहर छ
चाँडो आए हुन्थ्यो भन्छु 0मैले भन्दामा नहुने
शुष्माजीलाई पटकपटक पढियो THANKS.
यस भलाकुसारीमा केकी अधिकारी
Basu Subedi — Thu, 10/21/2010 - 06:59
यस भलाकुसारीमा केकी अधिकारी लै बोलाए हुने थियो नि हुदैन ?
nandalal.acharya — Thu, 10/21/2010 - 18:07
अनवरतरूपले साहित्याकाशमा विचरण गरिरहेका ऊर्जाशील जो कोहीका विचारोत्तेजक र फलदायी संवादको अपेक्षा मझेरीका पाठकले गरिरहेको कारणले वासुजीले उठाउनु भएको मतमा दुई मत नआउला !
कि कसो मित्रहरू ?
तीन मुक्तक (मङ्की स्टेट, नेपालीले के जान्यो, हिमाल)
हाँस्नु मात्र हैन जीवन
चुनाब हुदैछ शहरमा? (गजल)
बरको डाली नुहेर छोला कि
नेपाली कथाका प्रतिनिधि सङ्ग्रह
नाइँ गर्दिन म त बिहे !
चिसो चुलो जलेको भा
परदेशबाट तिहार सम्झेर
महाकवि देवकोटाका डाक्टर
प्राथना गर्छौ दुई हात जोडी (सरस्वती वन्दना)
चोखो प्रेम मिलिरहोस्